Weyneysashada Dibnaha iyo Gabdhaha Soomaalida:- Ma Qurux Baa Mise Qarash, khatar Iyo Qurux beel ? | Gaaroodi News
Weyneysashada Dibnaha iyo Gabdhaha Soomaalida:- Ma Qurux Baa Mise Qarash, khatar Iyo Qurux beel ?
August 30, 2021 | Published by: Tifaaftiraha
Baraha bulshada waxaa ku baahay haween badan oo Soomaali ah oo durtay dibnaha ama faruuryaha, si ay dabcan qurux uga raadiyaan.
Dad badan ayaa u arka in dibnaha loo weynaystaa ay qayb ka tahay quruxda qofka, halka kuwo kale ay u arkaan foolxumo la soo korodhsaday.
Qalliimada macmalka ah ee qofku ku beddelayo xubnihisii, isaga oo baadigoobaya qurux ayaa ku cusub Soomaalida dhexdeeda.
Weynaysashada dibnaha ayaa muddooyinkii danbe aad uga baahday dunida oo dhan, iyada warbixinaha la sameeyey tilmaamayaan in dhallin yar badani ay hawshaa ay u hawlgaleen.
Dadka caanka ee baraha bulshada isticmaala ayaa ah kuwa ugu badan ee saameeyey dhallinyartaas, ee ay ku dayanayaan.
Mid ka mid ah gabdhaha isticmaalay, Filsan ayaa warbaahinta maxaliga ah u shegetay, “Waligeey waxan jeclaa inaan weyneesto furuuryaheyga. Maanta waan ku faraxsanahay in faruuryaha la ii weyneeyay. Waxaan dareemayaa Qurux aan horay u laheen. Markii hore faruuryo yaryar ayan qabay hada kuwa qurux badan ayaan helay” Filsan oo ku nool Muqdisho ayaa Maanta qaliin looga sameeyay faruuryaheeda. Waana loo weyneeyay sida sawirada ka muuqata. “Qurux ayan ahay” ayey tiri
Waa maxay khatarta ay leedahay?
Meelo kala duwan oo dunida ha sida UK ayaa laga istcimaalaa, balse waxaa jira baaqyo soo baxaya gudah UK oo ha in sharci laga soo saara weyneynya faruuryaha iyo qaabka loo sameynaya. Dad qaar aya ka cabanaya khatarta ka soo gaadhay.
“Waxay gaadhay heer ay faruurtaydu dhab ahaantii bilawday inay korto, aad bay u xumaatay runtii waxaan dareemi karaa inay bilaabeen inay kala tagaan. “32-jir moodeel ah Lora Mua, ayaa sidaasi BBC-da u sheegtay
Knappier, ayaa iyana sheegtay in ay ka qaadday cuqdad kaddib markii muddooyin farabadan aysan ka bixin gurigooda xanuun awgii.
Waxaana ay raacisay in ‘halkii ay qurux raadinaysay ay foolxumo isu horseedday’Qaar ka mid ah khubarada hormuudka ka ah warshadaha bilicsanaanta ayaa hadda ku baaqay in xeerar adag laga sameeyo dawooyinka maqaarka.Tusaale ahaamn Dawladda gobolka Welsh ee daka UK waxay sheegtay in muhiim tahay in mustaqbalka laga tashada in ruqsad la siiyo dadka ku shaqeeya hawlahaas.
Ma jiraan sharci arrinatn ka hadlaya
Buuxiyeyaasha maqaarku waa cirbado loo isticmaalo buuxinta laalaabkii iyo dillaacii maqaarka, inkasta oo sidoo kale inta badan loo isticmaalo in lagu kordhiyo mugga iyo qeexidda dibnaha iyo dhabannada.Waqtigan xaadirka ah ma jiro sharci ka jira Soomaaliya iyo dalal badan oo adduunka ah oo sheegaya inaad u baahan tahay inaad yeelato tababar caafimaad si aad u fuliso habsocodka, taasoo la micno ah in qof walba uu qalabka ku dalban karo onleenka oo uu ku maamuli karo duritaanno.
Lennes oo ka timi Leicester, waxa ay sheegtay in ‘xanuun daran’ ay dareentay. Waxaana ay kula talisay hablaha ka danbeeya in aanay sidaa samayn, haddii ay falaanna ay ka araadsadaan qof caafimaad ahaan tababaran. Rachael Knappier kama ay bixin gurigeeda kaddib muddo afku bararsanaa.
Qiimahee ayay ku kacdaa in dibnaha la weynaystaa?
Iyada oo ku xidhan magaaladaada, xaddiga weynayshaha, iyo duritaanka, ayaa haddana buuxinta dibnaha ayaa ku kici kara meel kasta $ 500 ilaa $ 1,000. Haddii aad ku nooshahay magaalo weyn sida New York ama Los Angeles, waxaad filan kartaa inaad bixiso ilaa $ 2,000. In kasta oo ay tani u ekaan karto qaali.
Muddo intee leeg Ayay Shaqeyn kartaa
Muddada ay sii jiri kartaa wuu kala duwanaan karaa isaga oo ku saleysan da’daada iyo xaddiga buuxinta, laakiin guud ahaan, buuxiyeyaasha dibnaha ayaa soconaya lix bilood illaa saddex sano ka hor intaadan u baahnayn in mar kale dib loo farsameeyo